Ogaden News Agency (ONA) – Taar dhuleed oo Saraakiil Ethiopian ah u hanjabeen iyo Somali Channel oo diyaarisay Barnaamij looga hadlayo dhiibitaanki Muxumed Ani
Taar dhuleed oo Saraakiil Ethiopian ah u hanjabeen iyo Somali Channel oo diyaarisay Barnaamij looga hadlayo dhiibitaanki Muxumed Ani
Posted by ONA Admin	/ February 16, 2014
Hoos ka Daawo wareysiga Somali Channe iyo Qaabkii loo dhiibay Muxumed ani
Faah faahin Kooban
Gudomiyaha Gure ceel Cismaan taar dhuleed ayaa hada ka hor idaacada VOA u sheegay in deegaanka uu maamulo ee degmada Gura ceel laga qabtay 3 xubnood oo kamid ah Jabhada ONLF oo uu kamid yahay Muxumed Cabdullaahi (Muxumed Ani) oo isagu ahaa sarkaal sare oo kamida Jabhada ONLF. Warkan ayaa waxaa sidoo kale qiray Jabhada ONLF oo sheegtay in sarkaalkaas iyo labada qof ee la socday inay ku suganaayeen degmada guraceel halkaasna uu Muxumad Ani ku xanuunsana arrimo caafimaadna u tagay dhulka Jamuhuriyada Somalia. Jabhada ayaa sheegtay in sarkaalkaas iyo labada qof ee lasocdayba in maamulka degmada guraceel ay si sharci daro ah ku qabteen kuna wareejiyeen ciidamada gumeysiga Ethiopia.
Siro ONA ka heshay Gumeysiga
Hadaba TV-ga Somali Channel ayaa barnaamij ka diyaariyay qaabkii loo qabtay Muxumed Anni iyo labadii qof ee lalaqabtay. waxaana Somali channel barnaamijkan ka qeyb qaatay Xildhibaan Daahir Tamuuje oo u hadlayay Jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya iyo gudomiyaha Guraceel ee isagu qirtay in maamulkiisu qabteen sarkaalka ONLF ka tirsan.
Warar hoose oo aan ka helnay maamulka gumeysiga Ethiopia ayaa sheegaya in kadib markii warbaahinta Somali channel la hadashay gumeysiga ethiopia inay kasoo qeyb galaan Barnaamijkan inay diideen iskuna dayeen inay barnaamijka la joojiyo oo aan lasii deyn. Xubno kamid ah maamul ku sheega u adeega gumeystaha ayaa aad uga cadhooday Prograamkan una arkay in beentii Maamul goboleedka Guraceel iyo Gumeysiga Ethiopia baranbagaankii ay qarinayeen inuu banaanka usoo baxayo.
ilowareedkan ayaa ONA u sheegay In Gumeysiga Ethiopia dafirayo in sarkaalka ONLF laga qabtay dhulka Somalia.
ilwareedkan ayaa ONA sidoo kale u xaqiijiyay in Saraakiil kamid ah Ciidamada Woyanaha Ethiopia inay tageen degmada Guraceel lana kulmeen Gudomiyaha degmadaas. Waxaana canaan aad u kulul loo soo jeediyay Taar Dhuleed oo loo hanjabay, iyada oo lagu canaantay innuu fashiliyay qorshihii Ethiopia maaganeed ee ahaa in lagu sheego in” Muxumed Anni isasoo dhiibay oo nabad qaatay.”
Saraakiishan ayaa amar kusiisay Gudomiyaha degmada guraceel innuu Dafiro in sarkaalkan ONLF laga qabtay dhulka Somalia, waxaad sheegtaa ayaa lagu yidhi in maamulka Guraceel aysan shuqul ku laheyn qabashada saraakiishan lagana qabanin dhulka ay Ehlusuna waljamaaca maamusho iyo deegaanka guraceel toona. Halkan Riix saad u dhagaysato Wareysigii VOA-da ay la yeelatahay Taarlugeed.
Saraakiishan Tigreega ah ee Guraceel aaday ayaa walwal ka muujinaya Haayadaha Qaramada Midoobay ee u qaabilsan ilaalinta xuquuqda maxaabiista oo la filayo inay dowlada somalia kala hadlaan sababta loo dhiibay dad wadankooda lagu qabtay looguna gacan galiyay dad dhibaato u geysanaya, arrintaas oo ka soo horjeeda xeerarka caalamiga ah ee Qaramada Midoobay.
Halkan Hoose ka daawo Xildhibaan Daahir Tamuuje oo ka hadlaya dad gumeysiga Ethiopia ka afduubeen dhulka Kenya iyo kuwo maamulka Guraceel u gacan galiyeen gumeysiga Ethiopia. Siyaasada Gumeysiga Ethiopia oo ay fulinayaan dad somali ah oo calooshood u shaqeystayaal ah oo sheeganaya magacyo ururo islaam, kuwo ganacsatayaal somali sheeganaya iyo cadeymo badan oo aad ka dheehan doonto isbadalka marin habaabineed ee uu isku dayay Taar dhuleed innuu ku dafiro wariysigii uu siiyay VOA.
Waxaa xasuus mudan in Idaacada VOA uu gudomiyaha Guraaceel ka sheegay in sababta ay u qabteen sarkaalkan ONLF islamar ahaantaasna ku kaliftay inay Ethiopia u dhiiban ay tahay in dhibaato nooga imaanin dowlada Ethiopia. isaga oo sheegaya inay cabsi ka qabaan Ethiopia, balse cabsidaas ma uusan sheegin waxa ay tahay.